Ama-wipe wokususa izimonyo yizinto zokugeza ezilahlwayo ukusiza ukususwa kwezimonyo
Ama-wipe wokususa izimonyo yizinto zokugeza ezilahlwayo ukusiza ukususwa kwezimonyo, ngemisebenzi eyisisekelo yokuhlanza nokuswakama isikhumba. Thatha indwangu engalukiwe njengomthwali, engeza uketshezi lokuhlanza oluqukethe izinto zokususa izimonyo, bese ufeze injongo yokususa izimonyo ngokusula. Usua ...
Izinzuzo zokusebenzisa izesuli zokubulala amagciwane ezintweni zokuzivocavoca umzimba ukuqinisekisa ukuphepha kwezivakashi
Uma wake wazivocavoca ejimini, uzokwazi ukuthi bangaki abantu abasebenzisa le mishini ukuzivocavoca umzimba. Kepha ake ucabange ukuthi usebenzisa imishini engavulwanga. Manje uzivocavoca endaweni yokuzalanisa amabhaktheriya namagciwane, angakugulisa, futhi ezimweni ezimbi kakhulu, angaletha ...
Umkhuba wokuthuthukiswa kwelebula lokusula elimanzi
Amalebula okupakisha asula amanzi kudingeka ahlangabezane nezidingo ezikhethekile zokuqina, ukuvulwa nokuvalwa izikhathi eziningi, okubeka phambili izidingo eziningi ezikhethekile zokulebula uphawu. Njengamanje, kunezinkambiso ezintathu ekwakhiweni kwamalebula wethawula elimanzi: I-Trend 1: Amalebula wokubeka uphawu lula ...
Tshala izesuli zokuxosha omiyane, ukuvikelwa komuntu siqu
Namuhla ngithanda ukuncoma umkhiqizo ongakuvikela wena nomndeni wakho ekulungeni omiyane futhi ongawusebenzisa ngokuthula kwengqondo. Ama-wipe wokuxosha omiyane aphathekayo uma ulele. Uma kuphela ihlobo, kuzoba khona omiyane abacasula kakhulu ngasikhathi sinye njengoba kushisa! Ngilunyiwe ...
Kuyini ukusula okumanzi okufanelekile
Inani le-PH: Ngaphambi kokuthenga ama-wipe wamanzi, kufanele sihlole inani laso le-ph. Ngokuya ngemithetho kazwelonke, inani le-ph lama-wipe wet kufanele libe phakathi kuka-3.5 no-8.5. Ngokuya ngemiphumela yokuhlolwa, kuyahlulelwa ukuthi inani le-ph lama-wipe wet limfanelekile yini. Ungahlukanisa kanjani umswakama osula emanzini? ...
Iminyaka ehlukene yobudala ifanele ukusulwa okumanzi okuhlukile
Iminyaka ehlukene yobudala ilungele ukusulwa okumanzi okuhlukile, futhi izingane zinokumelana namandla, ngakho-ke izinto ezingathintwa kufanele ziphephe futhi zibe nempilo ngokuya ngezinto nezithako, ikakhulukazi lezo ezingathintana nesikhumba noma umlomo. Kukhona nokuhluka okuhlukile ...
Ungazikhetha kanjani izesuli zotshwala
Ungakhetha kanjani ukusula utshwala? 1. Ukuhlushwa kotshwala Ungabheka ukupakisha kwangaphandle nemiyalelo yokuthola kuqala ukuhlushwa kotshwala. Njengamanje, i-75% yotshwala isetshenziswa kakhulu emakethe, engafinyelela umphumela omuhle wokuvala inzalo. Izinhlobo ze ...
Ngokubuka komphakathi, izindwangu zendabuko zilukiwe. Igama lendwangu engalukiwe liyadida, ingabe liyadinga ukwelukwa ngempela? Izindwangu ezingalukiwe zibizwa nangokuthi izindwangu ezingalukiwe, okuyizindwangu ezingadingi ukwelukwa noma ukwelukwa. Ayenziwe ngokwesiko ngokuluka nokuluka ...
Unyaka osile womkhakha womhlaba ongalukanga
Ngenxa yomthelela wesifo esisha somqhele ngo-2020, izimboni eziningi ziye zabhekana nesikhathi sokuphela, futhi imisebenzi ehlukahlukene yezomnotho imile okwesikhashana. Kulesi simo, imboni yezindwangu engalukiwe imatasa kakhulu kunakuqala. Njengoba isidingo imikhiqizo efana magciwane wi ...
Izinto zokwakha sezikhuphuke kakhulu. Ngabe amanabukeni, ama-napkin sanitary nama-wipe asula ngeke anyuse intengo?
Ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, uchungechunge lwemboni yamakhemikhali lukhuphuke kakhulu, futhi amanani ezinto eziningi zokwenziwa kwamakhemikhali akhuphukile. Imboni yemikhiqizo yenhlanzeko isathwele kanzima kulo nyaka futhi ithinteka ngqo. Abahlinzeki abaningi bezinto eziluhlaza nezisizayo (kufaka phakathi ama-polymers, i-spandex, ...
Iphepha lasekhaya laseChina nemikhiqizo yokuhlanzeka yokungenisa nokuthekelisa ngo-2020
Ukungeniswa kwephepha lasekhaya Eminyakeni yamuva nje, umthamo wokungenisa wemakethe yamaphepha asendlini yaseChina ngokuyisisekelo uqhubeke nokwehla. Ngo-2020, ivolumu yokungenisa iphepha yamakhaya minyaka yonke izoba ngamathani ayi-27,700 kuphela, ukwehla ngo-12.67% kusuka ngo-2019.
Ngezinyathelo ezi-4 ezilula, zikufundise ukukhetha ukusula okuphephile! 1: Bheka izithako nokupakisha. Abazali kufanele bathenge ukusula okumanzi kwezinsana eziteshini ezijwayelekile, futhi kufanele bazibheke ngokucophelela lapho bekhetha: Ngezithako zomkhiqizo, kungcono ukukhetha imikhiqizo ebhalwe ngokusobala ukuthi ayinayo ...
Ikheli: Cha 908, Academician Road, Fenshui Town, Tonglu County, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Ama-wipe wokususa izimonyo yindlu yangasese elahlwayo ...
Izinzuzo zokusebenzisa ama-wipe magciwane ku-f ...
Tshala izesuli zokuxosha omiyane, uqobo ...